MARA Bell 222A FSX & P3D - Freeware
Bell 222A bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ atọ nke ịrụsi ọrụ ike na nraranye. Ihe oru ngo a lanariri otutu igbu oge ma buru kwa uzo iji dozie nchegbu mgbe onu ogugu mmadu na ndi enyi nke ndi ERS no. Ntugharị Rotorcraft Eagle dị mpako n'ikpeazụ nwee ike iweta 222A na ndị na-ege ntị. Ọ bụ ezie na enwere ọganihu ọzọ na-abịa n'ọdịnihu, ntọhapụ nke ugbu a zuru ezu na-atụgharị na ya.
Maka ngwa ngwa nke engines hụrụ vidiyo nke Rikoooo kere na ala nke ibe.
Ịgụ akwụkwọ ntuziaka dị mkpa, PDF usoro.
• Ojiji nke onwe gị, eserese na map, na eserese nkọwa
• FSX ihe eji egwu egwu
• 1 akwa elu mputa na ime ime
• Nri 4 ka emepụtara imeju afọ
• Ụdị FDE
• Nhazi DirectX
• Usoro usoro mmalite
• Akwa mma ụda setịpụrụ
Usoro nhazi ngwa ngwa
downloads 11 565
kere 26 Oct 2017